(1939-10-23) ၂၃ အောက်တိုဘာ၊ ၁၉၃၉ (အသက် ၈၀)
↑ Hmaw Win Thar U Khin Nyunt (April 2015). ကြုံတွေ့ခဲ့ရ ကျွန်တော့ဘဝအထွေထွေ (in Myanmar). Yangon: 100 kinds of flowers publishing house (ပန်းမျိုးတစ်ရာစာပေ), 36။ “"...ဦးဘညွန့်(ရှေ့နေ)၊ မိခင် ဒေါ်သိန်းရှင်တို့က ၁၃၀၁ ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၁ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။..."”
↑ Than Win Hlaing (November 2014). ဦးခင်ညွန့် (သို့မဟုတ်) ရက်စက်မှုအပေါင်းသရဖူဆောင်းခဲ့သူ (in Myanmar). Yangon: U Lwin Oo (Lwin Oo publishing house), 23။ “"...Wikipedia,afree online encyclopedia, erroneously described his birthdate as 11 Oct 1939”
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခင်ညွန့်၊_ဗိုလ်ချုပ်ကြီး&oldid=519239" မှ ရယူရန်
၇ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၁၆:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၇ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၁၆:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။